Kacdoonka dhalinyarada Berbera iyo cadaalad darrada xukuumada
Home QORMOOYIN Kacdoonka dhalinyarada Berbera iyo cadaalad darrada xukuumada
Waxa maalmahan ka socday Berbera arimo foolxun oo musuqmaasuq iyo eex qabyaaldeed oo dhinac maamulka Muuse Biixi tasoo ah in madaxdii iyo shaqaalihii madaarka Berbera lagasoo qoray Hargeysa iyadoo lagu magacaabay in sharikad la siiyay iyadoon loo tartamin!! Isla markiiba waxa jira in saamiqaybsigii ay beesha CM ku lahayd oo markii horeba maamulkii Siilaanyo ka qadiyay isagoo dagaal degaamaysi ah kulajiray, hadana markii MBC la doortay waxa la filaayay inuu cadaalad darrada wax ka qabto, haseyeeshee waxa cadaatay inuu MBC cid walba ka necebyay CM rabona inuu ka tirtiro Berbera. Taa waxa cadaynaayaa xilalka uu ka qaaday , mashaariicdii uu ka qadiyay iyo cadaadinta uu ku hayo ee weliba Ina Kaahin adeegsanayo isagoo laftiisu degaamaysi wada oo beeshiisa Berbera ku taxay.
Hadaba Reer Saaxil maxaa la gudboon?!
Anigu waxan qabaa labada gole ee degaanka iyo wakiilada ee metela Saaxil waa inay u guntadaan inay wax ka qabtaan dulmigan iyo gaboodfalkan xadhkaha goostay ee lagu hayo beesha CM oo in badan aamusnayd.
Waa inay xubnaha golaha wakiilada aanay codkooda siinin Kulmiye ooradhada gudoomiyaha golaha wKiiilada hadii arinta saamiqaybsiga ay guud ahaan CM xaq u leeyiin aan wax laga qaban waayo oo ay ku jiryo shaqaalaha Berbera.
Dhaliyaraduna diyaar haw ahaadaan mudaaharaad nabad ah oo ay mawqifkood ku cadaynayaan ilaa inta la taxgelinayo.
Previous articleDhalinta Reer Berbera Samir Taagwa ayaan idiin dardaarmaya !!!
Next articleMaxaad ka ogtahay Cabdillaahi Diiriye Cilmi (Weedhaafe)